Goputa onye ọka iwu Philippe Schol na izu ochi nke Schiphol: Martin Vrijland
Ọkaiwu na-ahụ maka ịgba égbè Philippe Schol na akụkọ ndebe akụkọ ụgha Schiphol
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 6 November 2019	• 6 Comments
Ọ ga-abụrịrị ihe dị mma n'anya ma na-ada ka ihe nzuzu mgbe m kwuru na aha Philippe Schol nwere njikọ dị ala na Schiphol. Lelee aha Philippe Schol. Subliminal enwere okwu a Schiphol. Mmemme Neuro Linguistic ma ọ bụ sistem subliminal bụ ya mere ihe na-eme n'amaghị ụbụrụ gị. Ndị a bụ ụdị "usoro hypnosis" nke ejirila na mgbasa ozi ruo ọtụtụ afọ. N’ezie o di egwu na a gbagburu onye oka iwu ozo, ma ogbugbu nke Derk Wiersum di otutu dika PsyOp (aru oru uche) ebe a anyi amaghi ma nke ahu apughi ikpe ozo. Nkwupụta ahụ Philippe Schol dị n'ihe ize ndụ n'ụlọ ọgwụ anaghị ewepụ ohere nke PsyOp. N'okwu niile enwere ike isoro ndị mmadụ mebiri emebi na PsyOp yana / ma ọ bụ iji arụ ọrụ miri emi rụọ ọrụ. Ihe ngosi Schiphol na-egosi ugbu a apụta ibu ihe nkpu.
Odi nkpa ighota ka enwere ike ijikọ PsyOps site na omimi miri na / ma obu imebi mmadu, mana karisia ihe nile ugbua obughi na onwa a na - eche ka ndi ozo di ike. Amepụta nsogbu nke mmetụta dị ukwuu na-elekọta mmadụ, na ebumnuche nke steeti ndị uwe ojii (inwetakwu ego ndị uwe ojii, ikpe ziri ezi na / ma ọ bụ ndị agha na ndị ọzọ uwe ojii steeti), bụ otu egwuregwu nke Psychological Operations si arụ ọrụ. Etu ị nwere ike isi mezie ụdị PsyOp a, Wag the Dog si 1997 atụgoro anya n'ụdị dị nro, mana anyị enweghị ike iwepu na ọ bụ omume mgbasa ozi kwa ụbọchị na ụzọ nke taa dị elu karịa n'oge ahụ. . Akọwaara m nke a n'ọtụtụ isiokwu:
Ọ dị mma ka ị gụọ akụkọ ndị ahụ nke ọma. Ọzọkwa na nke m akwụkwọ ọhụrụ M na-atụle isiokwu a ọzọ, ana m atụle nkọwa zuru ezu banyere otu esi egwu igwe. N'ihe banyere ogbugbu Derk Wiersum (enwere ike PsyOp), n'oge na-adịghị anya tupu Minista Ferdinant Grapperhaus jigidere n'ite ụtụ iji debekwu ego maka steeti ndị uwe ojii. Obere ego nke 110 nde ọ dịghị ihe na-erughị! Eeh, ị chere na nke ahụ dị mma, maka na mpụ niile a chọrọ ya niile:
E kwuwerị, anyị nwere ọgụ (PsyOp?) Buildinglọ Panorama, na (PsyOp?) ọgụ na Gralọ Telegraaf anyị nwere mmiri na-agba ya (PsyOp?) Usoro Marengo dika onye omempụ (okike onwe ya?) Mocro Mafia onye isi (miri emi?) Ridouan Taghi. Anyị amaghị. Ha niile bụ akụkọ mgbasa ozi. Ndi mgbasa ozi butere anyi ya, ya mere anyi jiri kwere ya. Ọ bụrụ na usoro mgbasa ozi ọzọ agbachiri nkịtị, ọ ga-abụrịrị eziokwu. "Eeh, ị nwere Martin Vrijland onye na-ekweghị na ihe niile anyị na-ahụ na mgbasa ozi, mana hey nke ahụ ekwekọghị n'usoro!"Ma ọ bụ nke ahụ dabara na nke a ma a na - egwuri anyị n'ezie na ọkwa mmepụta ihe nkiri John de Mol? Ee, John de Mol bụ onye nwe Algemeen Nederlands Persb Bureau nke ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke.
N'ihe banyere ụzọ dị nta nke usoro mgbasa ozi si dị, ọ bakwara uru ịkọwapụta ụzọ NLP ndị a kpọtụrụ aha na mbụ. Ọ bụ usoro aghụghọ a nke na - enweghị atụ, na - arụ ọrụ karịa ike karịa ka akpọpụtara mmemme site na njikwa nghọta, nke a na - emetụta ndị mmadụ kwa ụbọchị. Mmemme aghụghọ dị otú a na-ewere ọnọdụ site n'aka usoro ndị mmadụ maara naanị nke ndị gụrụ akwụkwọ gbasara mmụọ, psyche ma ọ bụ ahịa. Anyị na-ekwukarị banyere isiokwu nke edemede, foto ma ọ bụ onyunyo na-akpụ akpụ ma ọ bụ iwulite usoro akụkọ nke usoro ihe omume a dị ala. Okirikiri na-agbagharị na azụ na-aga n'ihu na akụkọ NOS bụ ihe atụ nke ụdị aghụghọ nke usoro hypnosis. Ọ bụ ezie na anyị nwere ike iche na ọ bụ naanị ndị na-eche echiche dị ka Victor Mids na-etinye ụdị ihe a, anyị anaghị a practicea ntị na omume a na-eme kwa ụbọchị nke ụdị akụkọ ahụ. Ma ọ bụrụgodi na anyị agụọla na a na-etinye usoro ndị a, anyị na-aga n'ihu na-agụ akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ na-ele akụkọ ahụ, n'ihi na anyị kwenyere na anyị nwere ike ịgabiga ya ma ọ bụ na anyị chọrọ 'ịhapụ ihe na-eme'.
Vidio dị n’okpuru na-egosi otu esi achọpụta usoro dị n’okpuru ala na-enwe mmetụta dị ukwuu n’ọkụ gị na-ahụ anya karịa ka i chere na ọ ga-ekwe omume. Akụkọ banyere igbu mmadụ na Schiphol nwere ike ịdị ka mkpu ụgha, mana ọ nwere ike ịbụ na ọ nwere ihe niile metụtara ya na mmemme subliminal iji dochie akụkọ akụkọ ndị ọzọ nke taa na ụbụrụ gị: Philippe Schol. Mustkwesịrị ka ewetara gị ma debe gị na ọnọdụ nnabata, ka ị nabata iwu ọhụrụ ndị a: ego ịba ụba ndị uwe ojii yana iwu ndị uwe ojii.
Lezie anya ka o sie ike mee ka a kpọọ gị n'onye buru ibu na mmekọrịta dị n'etiti gọọmentị na ndị mgbasa ozi na usoro mgbasa ozi ọzọ!
Na vidiyo ahụ, họrọ 'ndepụta okwu' wee họrọ 'ịsụgharị akpaghị aka' wee họrọ 'Dutch' maka ndepụta okwu Dutch
Ihe ndekọ njikọ njikọ: wikipedia.org, destentor.nl, rtlnieuws.nl
Akwụkwọ ọhụrụ Martin Vrijland 'Ihe mere dịka anyị siri hụ na ọ dị njikere' maka nnyefe!
Tags: ọkàiwu, miri miri, deepfakes, Derk, Derk Wiersum, agba, gbagburu, ndewo, mkpokọ ozi, etiti, ngosi, gbada, arụ ọrụ, Philippe Schol, uche, psyop, Schiphol, Wiersum
Ọzọ, a na - akpọ ya oku ka ọ kpọọ idd, mkpu mkpu na onye na - ekwu okwu parool na - eti mkpu na - eme ọpụpụ ọpụpụ |
"You nwere ike ịgwa m ihe na-ezighi ezi, ma'am?" Lee ederede bee njikọ, ee ee ee Parool, Telegraaf, NRC ọ nweghị ihe ọ bụla ọzọ.
CUT & Paste na ụbọchị na-esote ụbọchị Pauwtje nwere isiokwu ọzọ (nke nọworo na shelf ogologo oge).
Kedu ihe na-akpali ndị ahụ na-arara onwe ha nye ụdị ihe omume a, iji mee ka ndị na - ejighi ụra abalị na-ehi ụra ịchọrọ ndị agha psychlogen, ọ na-apụtawanye nke ọma.
Gịnị ka o mere?
Ihe na-apụta na MSM dị ka ihe mere nwere ike bụrụ naanị mmega ahụ maka ndị na-ahụ maka ile anya. Hụ ma sistemụ arụ ọrụ niile na-arụ ọrụ ma nwalee etu atụrụ na -eme ka anụ na-esi emeghachi omume ... ka emechara, ịha ahụ bụ ịmata
N’eziokwu, n’agbanyeghi na ha nwere ikike na ego ha, ha na ano ichu ndi mmadu ibe ya egwu. Maghị. Ha bụ ndị sụrụ ngọngọ na ike na ego na-enweghị ezigbo njirimara na iguzosi ike n'ezi ihe. A naghị ere ya ere.
Echefula na enwere egwu na ejighi n'aka n'ihi na ha enweghị ike ma ọ bụ ịchọ ịchọ ịmata n'etiti ndị nkịtị n'ihi na ha bụ ndị kwabatara, ọ bụ amaala nke kwabatara na-ejide okwu ndị ahụ. Rajọ na-atụfu isi okwu ndị ahụ na-atụghị anya ya na ikike ndị metụtara, ego wdg.
Ee, nke ahụ ziri ezi, ụmụ nwanyị na ụmụ nwanyị edere ederede na-agba mbọ ịrapagidesi ike ma ọ bụ na-enweghị ihe ọzọ na usoro ha nyere. Ndị a na-enyo enyo na-enyocha ụda ọ bụla na-agbagọ. Ọ dịtụbeghị iche na Madurodam, ebe a na-edebe ogige na ogige, a na - eme ka dikes ka mma .. ya niile dị mma, na - agbanwe agbanwe ma na - enweghị atụ .. ị ga - achọ ịnọ ebe ahụ 😀
" Adobe, Twitter na usoro mgbasa ozi na-ekwukarị na-aga ọgụ dị omimi?
Kedu ihe bụ nsogbu nitrogen, gịnị kpatara ndị ọrụ ugbo ji eme mkpesa na gịnị kpatara mbelata ọsọ? »
Nleta nile: 13.874.978